Zvirongwa zveApple zvemberi hazviendi kuburikidza nekubatanidza iyo iPad uye Mac | IPhone nhau
Zvirongwa zveApple zvemberi hazvisanganise kubatanidza iyo iPad neMac
Ignacio Sala | 26/04/2021 14:00 | iPad Pro, Noticias
Isu tanga tichitaura kwemakore mazhinji nezve mukana wezvirongwa zveApple zvekubatanidza iyo iPad neMac mutsara neimwe nzira kana imwe mune ramangwana, izvo inogona kuve yekutanga nhanho yekutsakatika kwemhando dzekupinda muMac renji, sezvazviri neMacBook Air mukufarira iyo Pro Pro, semuenzaniso.
Nekusvika kwePadOS uye macOS Big Sur, takaona kufanana kwakawanda mune ese ari maviri masisitimu anoshanda. Mushure mekutangwa kweiyo nyowani iPad Pro neApple M1 processor, pane runyerekupe rwakawanda rwekuti Apple inogona kusanganisa zvese zvishandiso, kunyangwe iyo kambani ichiti iro ramangwana rezvinhu zviviri izvi richaramba rakazvimirira.
Greg Joswiak, Chief Marketing Officer, naJohn Ternuns, Chief Hardware Officer, vakataura na The Independent, achitaura kuti kambani haurongere kubatanidza michina miviri kuita imwechete. Joswiak anoti kushandisa M1 processor mune nyowani iPad Pro hachisi chiratidzo chekuti Apple iri kushanda mukushandura michina miviri.
Pane nyaya mbiri dzinopesana idzo vanhu vanofarira kutaura nezve iyo iPad uye Mac. Kune rimwe divi, vanhu vanoti ivo vanopesana nemumwe. Kuti mumwe munhu anofanira kusarudza kana achida Mac kana kuda iyo iPad.
Kune rimwe divi, vanhu vanoti tiri kuvabatanidza kuita chimwe: kuti pane kurangana kukuru kubvisa zvikamu zviviri uye kuzviita chimwe. Uye chokwadi ndechekuti hapana pazvinhu zviviri izvi ichokwadi. Isu tinodada nekushanda zvakanyanya, zvakaoma kwazvo kugadzira zvigadzirwa zvakanakisa mumapoka avo.
John Ternus akawedzera izvo Apple zvinokurudzira kugadzira Mac yakanakisa uye yakanaka iPad uye kuti kambani icharamba ichitarisa izvo mune ramangwana, ichirasa iwo mazano nezve kusangana kunoenderana nemidziyo miviri.
Joswiak anosimbisa kuti vanga vachida kushandisa M1 processor mune nyowani iPad Pro renji kuvimbisa avo vangangove vatengi kuti chishandiso hachizovi chisingachashandi mumakore mashoma pamusoro pekupa vanogadzira mukana wekugadzira software iyo inobvumidza iwe kuti uwane zvakanyanyisa kubva mairi.
Izvo zviri pachena ndezvekuti chishandiso hachizoshandise kushanda mumakore mashoma anotevera, zvisinei, kana iyo Yemagetsi Khibhodi ine. Iyo keyboard ine trackpad iyo Apple yakatangisa gore rapfuura uye haienderane nechizvarwa chitsva cheiyo Pro Pro, sezvo iri 0,5 mm yakafara (nekuda kweiyo mini-LED skrini) iyo yainosanganisa.
Kana iwe wakatenga iyo YeMagetsi Khibhodi yeiyo 2018-inch iPad Pro 2020 uye 12,9 uye uri kuronga kutenga iyo nyowani iPad Pro 2021, iwe unozofanira zvakare kutenga iyo nyowani Khibhodi Yemagetsi, kutoti Apple tangisa kusimudzira kana kudzikisira painowanikwa yekuchengetedza mukati memwedzi waMay.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Zvirongwa zveApple zvemberi hazvisanganise kubatanidza iyo iPad neMac
Nomad naBelkin Vhura Chekutanga Chishandiso cheAirTags
Kushushikana kweAirDrop kunoisa data rako munjodzi